Mana hidhaa Jaaqoob Zuumaa keessa jiran, Afrikaa Kibbaa
Mannii murti dhimmaa prezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Jaqob Zuumaa irratti himata malaan maltumaa dhihaate ilaalu beellama hagayya 10ti dheereseeraa.
Manii murti olaanaan kutaa biyyati Kuwazulu Naatal jiru kana beellamma jaaqob Zuumaa achi bute abukaatonnii isaanii Zumaaan qaamaan waaan mana murtiitti dhihaachuu qabaniif dhimaa isaanii irrati qophaa’uudhaaf yeroo gahaa nu barbaachisa jedhanii waan gafataniif jedhameera.
Jaaqob Zuumaa yeroo amma nama wagga 79 yemuu ta’an, himannaa malanmaltumaa, keesumaa bara 1999 yemuu itti aanaa prezidaantii Afrikaa kibbaa turan jaarmiyaa meeshaa waraana omishu kan biyya faransaayi wajjiin waligaltee tasifame irratii yakki raawwatameeraa jedhame keessaa harak qabu jechuudhaan himataman.
Himannaa Kanaan walqabatee qaama qorannoo taasisu fuulatti dhihaatanii akka ibsa kenna ajajamanii waan ajaja fudhachuu didaniif mani muritii heera biyyatii hidhaa ji’a 15 itti murteessee mana hidhaa seenanii jiru.
Sabab hidhamuu Jaaqob Zuumaa tiin walqabatee hokkoraa umameen samichaa fi ajeechaa tasifameen lubbuun nama 200 darbeeraa. Umna waraanaa dabalatee Umnii nageenyaa biyyatii tarkanifii fudhateen namootan 1000 ol erga hidhamanii booda haalii hokkoraa akka tasgabaa’u ta’eera.
Jaaqob Zuumaa waggoottan 9f Afrikaa kibbaa prezidantumaadhaan hogganuun isaanii hin beekama.